Akụkọ - Ọgwụgwọ Laser: Ọgwụgwọ Laser 10 kacha mma maka akpụkpọ gị
emsculpting slimming igwe
4 ejiri emsculpting slimming igwe
2 ejiri emsculpting slimming igwe
Igwe na-ewepu ntutu laser diode 808
ejiri aka abụọ 808 igwe na-ewepụ ntutu isi
obere igwe na-ewepụ ntutu isi 808
otu aka 808 igwe na-ewepu ntutu
igwe slimming cryolipolysis
Igwe slimming velashaping
Mpekere rf micro agịga igwe
igwe obere agịga obere rf micro NBW-FR200
IPL+SHR+E-LIGHT 3 n'ime igwe 1
IPL SHR ELIGHT 3 NA 1-NBW-SHR212
IPL SHR ELIGHT 3 NA 1-NBW-SHR323
Enwere ike ibugharị Ipl
q gbanwere igwe laser ND yag
igwe na-ekesa co2 laser
igwe jụrụ oyi akpụkpọ anụ
ultrasonic caviation slimming igwe
igwe ihu igwe hydro
igwe dermabasion hydro
obere igwe dermabrasion hydro
igwe na-ewepụ udide udide
980nm Laser udide vein mwepụ igwe
Igwe na-ewepụ Ududo Ugboro dị elu
picosecond laser igwe
lekwasịrị anya rf akpụkpọ tightening igwe
Ọgwụgwọ Laser: Ọgwụ Laser 10 kacha mma maka akpụkpọ gị
Usoro laser 10 kachasị dị irè maka akpụkpọ gị.
Obi abụọ adịghị ya, PicoWay Resolve Laser bụ ngwaahịa kachasị mma n'ahịa maka acne scars na ụdị akpụkpọ anụ ndị yiri ya. ịnọgide na-enwe ọbụna ọdịdị. Gịnị bụ karịsịa ukwuu banyere PicoWay bụ na, n'adịghị ka omenala lasers, ị nwere fọrọ nke nta ka ọ dịghị downtime mgbe ịwa ahụ, na ị ga-enwe nnọọ obere mgbu n'oge usoro.
PicoWay bụ laser dị elu nke ukwuu, yabụ ị na-achọkarị oge ole na ole karịa ọgwụgwọ laser ndị ọzọ. Dabere n'oke ọnya ihe otutu gị, ị nwere ike ịchọ ọgwụgwọ 2-6.
Maka mgbochi ịka nká (ezigbo ahịrị, wrinkles na sagging skin), ndị na-ahụ maka dermatologists na ndị na-ahụ maka ihe na-edozi ahụ na-akwado Fraxel Laser Facial. Laser fractional na-abụghị nke na-adịghị emerụ ahụ adịghị emebi epidermis (mpụta oyi akwa nke akpụkpọ ahụ). Kama nke ahụ, okpomọkụ na-abanye n'ime miri emi. n'ime dermis ma na-akpata mmebi okpomọkụ, na-akpali mmepụta nke collagen iji jupụta n'ahịrị dị mma na wrinkles. Ọ na-edozi akpụkpọ anụ ahụ site na imeziwanye akpụkpọ anụ ahụ, si otú a na-enye mmetụta na-ebuli ihu.
Dabere na ọkwa nke ịka nká akpụkpọ ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ ọgwụgwọ 4-8 na-emetụ aka kwa ọnwa 6-12. Ozi ọma ahụ bụ na Fraxel lasers dị nro na akpụkpọ gị ma na-enye obere peeling na downtime karịa lasers ablative.
Maka ọgwụgwọ rosacea laser, GentleMax Pro (ma ọ bụ ND: YAG Alex Laser) dị mma n'inyere aka belata ọdịdị rosacea na mgbaze veins na cheeks ma ọ bụ chin.GentleMax Pro a na-akpọ nwayọọ maka ihe kpatara ya - o wulitere nkà na ụzụ jụrụ oyi. nke na-echebe anụ ahụ gburugburu capillaries gbawara agbawa na veins spider. Uru nke teknụzụ a bụ okpukpu abụọ:
Ọnụ ọgụgụ nke ọgwụgwọ achọrọ na-emetụta kpọmkwem na oke mgbaàmà. Mee atụmatụ inwe ma ọ dịkarịa ala 2 na ihe dị ka 8 iji hụ nsonaazụ kacha mma.
Ọzọ, maka iwepụ veins na-adịghị mma, GentleMax Pro (ma ọ bụ ND: YAG Alex Laser) bụ nhọrọ mbụ. Mba, ND: YAG laser bụ igwe nke nhọrọ n'ihi mmetụta ya dị mma nke na-ekpuchi: ebe ụfọdụ lasers na-ahapụ streaks, okirikiri ma ọ bụ gburugburu. usoro mmanụ aṅụ ebe veins dị, Alex laser yikarịrị ka ọ ga-arụpụta nsonaazụ doro anya, ọ dịghị akụkụ nke fọdụrụnụ.
Ọ bụrụ na mkpuchi gị anaghị ekpuchi ọgwụgwọ vein laser, na-atụ anya na ọgwụgwọ gị ga-efu ihe dị ka $450 kwa ọgwụgwọ. Ọnụọgụ a nwere ike ịgbanwe dabere na ọnụ ọgụgụ na nha nke veins gị.
Maka ihe nrịbama na-acha ọcha, ọgwụgwọ akpụkpọ anụ laser kachasị mma na ahịa bụ Fraxel. Ọzọkwa, n'ihi na laser Frax adịghị emebi epidermis (mpụta nke akpụkpọ ahụ), ọgwụgwọ gị na oge nkwụsịtụ gị ga-ebelata nke ukwuu. Kama nke ahụ, okpomọkụ na-abanye n'ime ya. miri n'ime dermis ma na-akpata mmebi okpomọkụ, na-enyere aka ịkwalite mmepụta cell ma na-akpali mmepụta nke collagen iji jupụta na mgbatị.
Maka ọnya na-emighị emi, ND: YAG laser (lee n'elu) bụ nhọrọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ọnyà gị dị omimi ma buru ibu, laser CO2 nwere ike ịka mma. Ngwọta laser CO2 abụghị egwuregwu - ha na-egbu mgbu ma na-achọ nkwụsịtụ n'oge okpomọkụ. ọgwụgwọ. Oge mgbake dị ogologo ma akpụkpọ ahụ gị nwere ike ịpụ n'ime izu 2 mbụ mgbe ọgwụgwọ gasịrị. Otú ọ dị, prognosis dị ezigbo mma. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike iwepụ ihe omimi miri emi kpamkpam, ịmegharị akpụkpọ ahụ nwere ike inyere aka na-egbuke egbuke ma mee ka ha ghara ịhụ anya, karịsịa. mgbe eji etemeete.
Laser CO2 nwere ogologo oge mgbake mana ọ dịkwa ike nke ukwuu. Ị nwere ike ịchọ naanị ọgwụgwọ 1-3 iji hụ nsonaazụ kacha mma.
IPL ma ọ bụ ufiop pulsed ìhè abụghị kpọmkwem a laser, ma ọ na-arụ ọrụ n'otu aka ahụ ma na-touted dị ka otu n'ime ụzọ kasị mma na-emeso ọchịchịrị tụrụ (hyperpigmentation) na ihu.IPL Photofacials na-eji elu-ike ìhè, dị nnọọ ka a laser, ma mgbe. na laser oru ngo ìhè na a kpọmkwem ntụziaka, na IPL-eziga ìhè na otutu wavelengths, ọzọ dị ka a flash.Your akpụkpọ pigmenti absorbs ìhè ike na-atọghata ya n'ime okpomọkụ, triggering akpụkpọ gwọọ hyperpigmented ebe na weghachi gị odidi na texture.IPL. adịghị nwayọọ dị ka ọgwụgwọ ọkụ ndị ọzọ dị ka LED, ma ọ bụghịkwa ihe na-egbu mgbu dị ka lasers omenala. Ọ na-ewe naanị otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka ị gwọọ, ma enwere ike ịnwe naanị ọbara ọbara dị nro na ntakịrị ntachu mgbe ọgwụgwọ gasịrị.
Ngwọta ntutu isi nke laser bụ ihe dị mma ma dị irè maka ịwa ahụ ịkpụ ntutu. Ọkụ na-acha uhie uhie ma ọ bụ obere ike laser nwere ike inye aka kpalite mkpụrụ ndụ na-adịghị ike n'ime ntutu isi, mee ka ntutu dị ọhụrụ ma malite ịmaliteghachi ya. N'ụzọ dị mwute, nsonaazụ ya adịchaghị ekwekọ, na ọgwụgwọ adịghị ka ọ na-arụ ọrụ maka onye ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na anyị aghọtachaghị ihe na-akpata ntutu isi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na Rogain na ngwaahịa ndị yiri ya abụghị nhọrọ, nke a bụ ọgwụgwọ nhọrọ mbụ dị mma. ndị na-adịghị emerụ ahụ, na ọ bụ ezie na ọ gaghị eme ka ntutu isi gị dịkwuo elu, ọ ga-ewusi ntutu isi gị na-arụ ọrụ ike ma nyere gị aka ibelata ntutu isi n'ọdịnihu.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta ọgwụgwọ ntutu isi laser ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa, na ọgwụgwọ nwere ike ịdịru afọ 2-10 dabere na ntutu isi na ntutu isi.
Enwere ọtụtụ ọgwụgwọ ọkpụkpụ anụ ahụ na-adịghị ahụkebe na ahịa. A na-ewere liposuction laser dị ntakịrị, ma ọ na-achọ mma na oge nkwụsị karịa CoolSculpting ma ọ bụ EmSculpt.N'oge cellulite laser, dọkịta gị ga-eme obere mbepụ na mpaghara a na-emeso ya na Tinye obere laser. Ike laser lekwasịrị anụ ahụ dị abụba anya wee gbazee ya. A na-ewepụ laser ahụ wee tinye obere tube a na-akpọ cannula, nke a na-eji eme ka abụba na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Ị ga-achọ izu ike maka ụbọchị 3-4 mgbe ịwachara ahụ. ma ọ ga-ewe ihe dịka izu atọ iji laghachi n'ọrụ ọ bụla siri ike.
Cellulite laser bụ otu n'ime ọgwụgwọ laser kachasị ọnụ, na-efu $ 2,500 na $ 5,000 kwa nnọkọ. Otú ọ dị, ị nwere ike ịchọrọ naanị otu ọgwụgwọ, n'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ ọgwụgwọ kachasị ọnụ ala nke aesthetic abụba ọnwụ n'ikpeazụ.
N'ihi na ndị kasị ngwa na kasị dị irè laser igbu egbugbu, họrọ PicoWay Laser.Tattoo ink bụ a pigmenti nke a na-etinye n'okpuru akpụkpọ ahụ na iberibe nke ukwuu maka ahụ agbaze.Ọ bụghị n'ihi na enweghị na-agbalị: Mgbe ị nwetara gị mbụ. igbu egbugbu, mkpụrụ ndụ ọbara ọcha nke ahụ gị na-agbalị iwepụ ink. Ya mere ọ na-acha uhie uhie na ntakịrị fụrụ akpụ. Ọ ka nwere ike maka WBC gị iwepụ pigmenti;pigmenti dị nnọọ kwesịrị ịbụ obere ezu. PicoWay bụ a picosecond laser.It bursts nke ìhè na a ogologo nke otu trillionth nke a second.This incredibly ngwa ngwa na-agbajikwa ọbụna toughest pigments otú ahụ gị nwere ike ndammana-asachapụ ya. ngwa ngwa ma dị egwu. Ọbụna mma, ọbụna ụda akpụkpọ anụ nwere ike iji PicoWay.
Na PicoWay Laser, ị nwere ike iwepụ egbugbu gị kpamkpam na naanị ọgwụgwọ 1. Ọ bụrụ na egbugbu gị siri ike karị, ị nwere ike ịchọ igbu egbugbu 2 ma ọ bụ 3.
Ọgwụgwọ ọ bụla na-efu $150, mana ọnụ ahịa nwere ike ịgbanwe dabere na nha egbugbu ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na lasers na-agbanwegharị ụlọ ọrụ mara mma ma nọgide na-enye ọtụtụ nhọrọ ọgwụgwọ. Ndị dọkịta na ndị ọkachamara ahụike na-emepụta nkà na ụzụ ọhụrụ na ọgwụgwọ iji nyere aka dozie ọtụtụ nlekọta anụ ahụ na ịma mma, na-eme ka ụlọ ọrụ laser bụrụ ebe na-akpali akpali maka ego- ndị na-eri eriri.
Oge nzipu: Eprel-07-2022
Ndụmọdụ nlekọta anụ ahụ: Ndụmọdụ siri ike maka akpụkpọ ahụ nke na-eme ka ọ daa
Ị chetụla maka HydraFacial?R...
Ọgwụgwọ Laser: Nke 10 kacha arụ ọrụ L ...
Emsculpt kacha ọhụrụ ngwaọrụ na-ejikọta ahụ abụọ ...
Kedu ka igwe co2 fractional laser...
Ụlọ nke atọ, Ụlọ nke 5, Ụlọ ọrụ Maohua, Nancai Town, Shunyi District, Beijing
Kpọọ anyị ugbu a: 0086-60418533